Sheekada filimka 2.0: Lacagta 500 Crore ($75m) meel cidlo ah kuma bixin kani waa filim dhameestiran! – Filimside.net
Sheekada filimka 2.0: Lacagta 500 Crore ($75m) meel cidlo ah kuma bixin kani waa filim dhameestiran!
November 29, 2018 Zakarie Abdi
Taariikhda: November 29, 2018
Ma qiyaasi kartaa Mobile la’aan ama taleefonka gacanta la’aantiisa in xiligaan nolosha toos u socon karto? Jawaabta waa maya madaama Mobile-ka wax walbo oo muhiim ah fududeeyo waayo xiligaan la joogo nolosha waa casri waxayna la jaan qaadaa aaladaha casriga ah ee soo kordhaayo ama is bad badalaayo.
Director Shankar kaliya ma ahan filim sameeye ee waa hal abuure caqli badan kana fikiro wax walbo oo qayaali ah oo dadka lagu mada daalin karo sidaa darteed 2.0 waa mashruuciisa ugu weyn oo miisaaniyad 500 Crore ku baxday qof walbana rajo wanaagsan ka qabo.
Director filimkiisii Robot (2010) waa mid uu ku muujiyay in fanka iyo aalada casriga ah kala maarmin markaana qaybta labaad e Robot ayuu la yimid wuxuuna magaca 2.0 waa filimka maanta dunida oo idil laga daawanayo qiimeyn gaar ahna lagu haayo.
Jilaayaasha 2.0: Rajinikanth, Akshay Kumar, Amy Jackson
Fariinta Filimka 2.0 Oo Kooban: waa filim ku saabsan awooda uu leeyahay nin xumaan badan dabacsan iyo sida Robot-ka bini aadanka u adeegsanayaan si halista weyn ee kusoo fool leh loo yareeyo madaama aan la bur burin karin.
Dr. Vasigaran (Rajinikanth) nolosha dhanka aaladaha casriga sameyntooda hormar wacan ayuu ka gaaray nolol dagana wuu ku jiraa wuxuuna marwalbo sare u qaadaa dhiiri galinta in Robot-ka la adeegsado, markaana wuxuu sameenaa gabbar Robot ah oo qurux badan laguna magacaabo Neela (Amy Jackson) taasi oo hawlaha guryaha qaban karto.
Dhinaca kale arimo naxdin iyo yaab leh ayaa magaalada ka socdaan waayo taleefon kasto oo shacabka wataan waa laga qaataa weliba si awood ku dheehan qofka asigoo u jeedo ayuu taleefoonkiisa gacanta laga qaadanayaa hawada sarena ku mirqiyaa taleefoonka waxaana dhalaanaayo buuq iyo muran badan oo ku aadan cidda taleefoonada dadka ka aruursato ee aan waxba laga qaban karin.
Madaxa shirkadaha Mobile-da ee sida Jumlada iyo tafaariiqda kaga ganacsadaan Manoj Lulla (Kaizaad Kotwal) iyo hogaamiye sare oo caan ah R S Vairamoorthy ayaa la dilaa waxaana dilaayo sheydaanka awooda badan ee dadka Mobile-da ka aruursado inta badana wuxuu leeyahay muuqaalka shimbir weynin badan oo aad u fool xun lagana cabsanaayo.
Dr. Vasigaran (Rajinikanth) ayaa arinkan ka war helaayo wuxuuna dowlada weydiisanaa inuu dib usoo celiyo Robot-kii awooda badnaa Chitti (Rajinikanth) si uu halista shacabka ku socoto uga hortago balse siyaasiga awooda badan Dhinendra Bora (Sudhanshu Pandey) ayaa kasoo horjeesanayo in dib loo soo celiyo Chitti madaama uu horey dhibaato nafeed iyo bur bur hanti horey u geestay.
Laakiin marka ay arinka sii xumaado wasiirka arimaha gudaha Vijay Kumar (Adil Hussain) ayaa Dr. Vasigaran (Rajinikanth) siinayo fasax uu dib ugu soo celin karo Robot-kii awooda badnaa Chitti (Rajinikanth).
Chitti (Rajinikanth) ayaa dib loo soo celinaa wuxuuna bilaabaa inuu dagaal la galo sheydaanka awooda badan ee shimbirta u eg sidoo kalena dadka dhan cabsi ku reebay. Laakiin si dhaqsi ah Chitti (Rajinikanth) ayaaba maaro u weyneeyo awood ahaan inuu sheydaankan ka hortago!
Sheydaankan awooda badan qof kale ma ahan waa Dr. Pakshirajan (Akshay Kumar) kaasi oo noloshiisii hore mugdi badan iyo xanuun badan xambaarsan sidoo kalena awood ahaan aan loo dhawaan karin.
Dr. Pakshirajan (Akshay Kumar) ma nasan doono ilaa uu ujeedkiisa ka gaaro madaama uu dagaal kula jiro adeegsiga Mobile-ka bini aadanka adeegsanayo!
Qaybaha dambe filimka 2.0 waxaa loo daawan doonaa: Dr. Vasigaran (Rajinikanth) awood kale halkuu ka keeni doonaa marba haddii Robot-kii uu soo diyaariyay Chitti (Rajinikanth) uu awoodi waayay inuu dadka ka difaaco sheydaanka Mobile-ka adeegsigiisa diidan?
Dr. Pakshirajan (Akshay Kumar) isagana muxuu ku nucay Mobile-ka adeegsigooda sidoo kalena ujeedkiisa muxuu yahay sidoo kalena sidee looga guuleesan karaa?
Maxaa Laga Yari Fariinta 2.0 Qiimeyn Ahaan:
Director Shankar sheekadiisa waa mid qayaali ah oo hab casri ah loo sameeyay laguna kabay dareen qiiro badan waana waxa ugu muhiimsan ee filim loo daawado inuu mada daalo leeyahay sidoo kalena dareen qiiro badan oo bini aadanka taabanayo xambaarsan yahay.
Halka saac hore inaba caadi ma ahan qaabka filimkan fariin ahaan loo dhigay muuqaal walbo waa mid micno weyn xambaarsan sidoo kalena kala barka filimkan (Intermission) waa mid aan caadi ahayn oo kugu qasbeyso inaadan sugan karin daawashada halka saac dambe.
Director Shankar mowduuc muhiim ah ayuu banaanka soo dhigay oo ah shucaaca adeegsida Mobile-da halista ay leeyihiin dhanka soo saarkooda iyo adeegsigooda balse mowduucan kuma uusan daahin kaliya wuu dul maray balse si adag oo saameyn leh ayuu kaga hadlay.
2.0 waa mid ka mid ah aflaanta ugu wanaagsan Hindiya sameeyaan 500 Crore meel cidlo ah kuma bixin waayo 148-daqiiq filimkan soconaayo waa mid aysan ku jirin hal muuqaal oo habacsanaan ka muuqato ama aan ku xiiso galineyn.
Taxanahan Robot-ka ka hadlo labo door ayuu horey caan ugu ahaa Dr. Vasigaran (Rajinikanth) iyo Chitti (Rajinikanth) laakiin markaan heer kale xiiso ahaan waxaan taxanaha Robot gaarsiiyay doorka awooda badan ee lagu soo kordhiyay waana doorka xiisaha badan Dr. Pakshirajan (Akshay Kumar).
Superstar Rajinikanth waa xidiga filimkan min bilaaw ilaa dhamaad isaga ayaa xaday bandhiga shaashada! Bilawga hore doorkiisa dhaqtarka seynisyahanka waa mid wanaagsan laakiin wuxuu hadal heynta filimka ku qaatay doorkiisa Robot-ka inaba caadi ma ahan sida uu u xarakeenayo iyo uultimada ama dhamaadka filimkan ficilada dagaalka uu sameenayo waa mid daawadayaasha xasuus gaar ah ku reebi doono.
Superstar Akshay Kumar goor dambe ayuu shaashada soo galaa muuqaal ahaan wajigiisa dhabta ah laakiin saameyn aad u weyn ayuu ku leeyahay filimkan inkastoo waqtigiisa muuqaal ahaan xadidan yahay.
Waxaa si gaar ah kuu soo jiidanayo muuqaladiisa xasuusta ama sheekada ah sidoo kalena muuqaalkiisa bahal ahaan loo sameeyay waa mid siweyn dadka kaga yaabin doono kanni ma ahan laadarintii horey aflaanta Hindiga ugu arki jirteen waa laadar isaga dartiisa filimka loo daawan doono.
Amy Jackson door aad u muhiimsan ayay filimkan ku leedahay weliba ka yaabin doono marka aad daawatid inkastoo filimkan Rajini iyo Akshay ku xifaaltamayaan.
Dhamaan jilaayaasha kale ee filimkan kasoo muuqdeen ee doorarka caawiyaha ah ku leh micno muhiim ah ayay ugu jiraan waxaana amaan gaar ah mudan Sudhanshu Pandey, R S Vairamoorthy, Kaizaad Kotwal iyo Adil Hussain bandhigyada ay sameeyeen.
Muxuu Ku Wanaagsan Yahay Filimka 2.0:
Qaabka fariinta Director Shankar u dhigay
Action-kiisa caalamiga ah iyo adeegsiga aalada VFX.
Muusigada gadaal ka yaareyso (Background Score) oo si wacan AR Rahman u diyaariyay.
Muxuu Ku Liitaa Filimka 2.0:
Ma jirto meel uu ku liito waa filim dhan walbo ka dhameestiran!
Qiimeynta Sheekada Filimka: 5/5 (Shan Xidig Dhameestiran Ayuu Helay)!
Gunaanad: 2.0 waa filim qof walbo oo jecel daawashada aflaanta qasab ku ah inuu daawado si uu ugu raaxeesto Director Shankar fariintiisa qayaaliga ah balse micno gaar ah xambaarsan si uu nuxurkeeda u dhuuxo.
Rajinikanth waa 67-jir dunida maanta qof walbo mada daalin karo sidoo kalena 2.0 wuxuu ku muujiyay waligiis inuu kaalinta kowaad kaga jiri doono sameynta filimada mada daalada dhameestiran leh oo aysan jirin cid ku gaari karto.
Taageerayaasha Akshay Kumar fadlan daawada filimkan Superstar-kiina waqti ahaan filimkan kuma badno sida Rajini oo kale laakiin waa laadar awood badan door saameyn lixaad lehna la siiyay hubaal ahaana Akki taageerayaasha ka heli doonaan bandhiga shaashada uu ka sameeyay.
2.0 waa Blockbuster la hubo kaasi oo dibad iyo dal ganacsi taariikhi ah ka sameyn doono mar kale waxaa cadaatay sameynta aflaan tayo wanaagsan in Koonfur Hindiya laga sugan doono waayo Bahubali labadiisa qeybood kadib 2.0 waa filim kale oo fanka Hindiya tayo ahaan sare u qaaday laakiin Bollywood-ka daawadayaal ka yihiin cayaarta tiyaatarada ka socoto iyo sida daawadayaasha loo soo jiidan karo!
Fadlan hoos ka daawo goos gooska filimka 2.0 ee sheekadiisa 100% qof walbo amaan lixaad leh kala dul dhaceyso:
Waxaa Aqrisay 2,312
Thanks ustaad lkn waqtiga yar ee akki Ku leeyhay ma Kan wajigisa sida dhabta lo arkaa ama doorka filmka Ku jilaa dhan
Micnaha labadiisa waji ayaa yar waayo cabsida wuxuu sameynaa asigoon la arkeynin balse halka saac dambe ayuu toos shaashada usoo galaa.
Woow waan sugi lahay sxp zakaria malaha waa 148-daqiiqo.
Adiga mudan sxb waan ka dhigay 148-daqiiqo.
Sxb zaki1 sual ayan ku waydina aaway atoorihii Filimkii CANAAD ku jiray ee asi iyo ajakis iyo jeeri ahayen aaway atoorahaas inu dhintay ayan maqlay run miya sidee u dhintay
Sxb waxba kaagama sheegi kari lama socdi.
Abdimajed Saed Adam says:
saki bro muqalada mala heli kara waqtiga ay saran yihin tiyatarada ama isbuucya kadib.
midkle adiga space ma heli karta aad kuso galiso filimanta waweyn kaliya sida 2.0 oo kle
Waa la heli karaa laakiin aniga ama anaga muuqaalo masoo galino Web-ka ama Page-ka.
sxb yaal intee ka daawan karaa asigoo ah af tamil ka ah oo nadiif english subtitues leh linkisa isoo dhir haduu yhy lacag waa diyaar aqyaarta